fahavaratra an-dakozia fahavaratra Fahatsapana zavakanto - hevitra ho an'ny trano sy zaridaina
Takelaka rindrina Takelaka rindrina
Varavarankely fitaratra voasarona
Sarin'ny lakozia mena
Sarin'ny lakozia amin'ny loko marevaka
Sarin'ny lakozia misy endrika D-D
Sarin'ny lakozia miloko fuchsia
Sarin'ny lakozia mahazatra lakozia
Sarin'ny lakozia volomparasy
Sarin'ny efitrano fandraisam-bahiny miaraka amin'ny lakozia sy efitra fisakafoana - hevitra momba ny fanaka
Sarin'ny efitrano fandraisam-bahiny amin'ny volontany sy beige
Sarin'ny efitrano fandraisam-bahiny amin'ny fotsy
Sarin'ny efitrano fandraisam-bahiny amin'ny fotsy, beige ary volontany
Sarin'ny rindrin'ny fahitalavitra - hevitra ao ambadiky ny rindrina aorian'ny fahitalavitra
Sarin-tsary sy hevitra momba ny fikolokoloana ny atitany
Sarin'ny efitrano fandraisam-bahiny
Lalambe sy làlana
Saripika sy hevitra ho an'ny lalantsara sy lalantsara
Saripika sy hevitra ho an'ny trano tokana
Sarin'ny trano maoderina misy dobo filomanosana
Ny fandaminana sy ny fanaingoana ny zaridaina
Ravaka tao an-jaridaina
Notsonga'ny My Cont Photo Photo Contest
Ivan Dimitrov ………. Saripika mpandray anjara voafantina avy amin'ny My
Anya Gyoreva ………. Saripika mpandray anjara voafantina avy amin'ny My
Steli Nikolova ………. Saripika mpandray anjara voafantina avy amin'ny My
Stefka Anestieva ………. Sarin'ireo mpandray anjara voafantina avy amin'ny My
Boryana Georgieva ………. Sarin'ireo mpandray anjara voafantina avy amin'ny My
Steisi An ………. Sarin'ireo mpandray anjara voafantina avy amin'ny My
Kalinka Stoilova ………. Sarin'ireo mpandray anjara voafantina avy amin'ny My
Desi Ivanova ………. Sarin'ireo mpandray anjara voafantina avy amin'ny My
Asia Doikova ………. Sarin'ireo mpandray anjara voafantina avy amin'ny My
Rindrina vita amin'ny rindrina
Decorations for valindrihana
Haingo ny Paska
Satroka sy jiro
Efitry ny ankizy
Jamba sy ambainy
Ny loko ao anatiny
Styles ao anatiny
Manorata fomba resa
Ny fandaharana sakafo sy ny fanamboarana
Mandeha haingana, mora, mahafinaritra!
Sakafo ho an'ny Noely
Ataovy ny tenanao
Valiny ho an'ny: fahavaratra an-dakozia fahavaratra
Hevitra ho an'ny lakozia fahavaratra amin'ny terrace
Efa nanolotra hevitra vitsivitsy izahay mba hampahomby ny terrace
Elitis sy Lady Jane
TAFITA MPANJY ARY NY FANAVAOZANA TANANA
Firavaka Lady Jane
Art Studio - fitaratra mihosotra
Studio bubble - Knit Accessories
Mikaraho ny arisiva
Mikaraho ny arisiva - Safidio ny volana - May 2020 Aprily 2020 March 2020 Febroary 2020 Janoary 2020 Desambra 2019 Novambra 2019 Oktobra 2019 Septambra 2019 Aogositra 2019 Jolay 2019 Jiona 2019 May 2019 Aprily 2019 March 2019 Febroary 2019 Janoary 2019 Desambra 2018 Oktobra 2018 Septambra 2018 Aogositra 2018 Jolay 2018 Jiona 2018 May 2018 Aprily 2018 March 2018 Febroary 2018 Janoary 2018 Desambra 2017 Novambra 2017 Oktobra 2017 Septambra 2017 Aogositra 2017 Jolay 2017 Jiona 2017 May 2017 Aprily 2017 March 2017 Novambra 2016 Jolay 2016 Jiona 2016 May 2016 Aprily 2016 March 2016 Janoary 2016 Desambra 2015 Novambra 2015 Oktobra 2015 Septambra 2015 Aogositra 2015 Jolay 2015 Jiona 2015 May 2015 Aprily 2015 March 2015 Febroary 2015 Janoary 2015 Desambra 2014 Novambra 2014 Oktobra 2014 Septambra 2014 Aogositra 2014 Jolay 2014 Jiona 2014 May 2014 Aprily 2014 March 2014 Febroary 2014 Janoary 2014 Desambra 2013 Novambra 2013 Oktobra 2013 Septambra 2013 Aogositra 2013 Jiona 2013 May 2013 Aprily 2013 March 2013 Febroary 2013 Janoary 2013 Desambra 2012 Novambra 2012 Oktobra 2012 Septambra 2012 Aogositra 2012 Jolay 2012 Jiona 2012 May 2012 Aprily 2012 March 2012
Art Senses dia famoahana elektronika famolavolana anatiny izay hanolotra hevitra vaovao sy ny haingo an-trano sy zaridaina. Hevitra mahaliana ao an-trano.
Izahay hanampy anao amin'ny torohevitra artista sy soso-kevitra azo ampiharina.
Mahafinaritra ary avelao ny fanahy mamorona hameno anao tanteraka!
Momba anay »
Ankafizo ny fomba tsy manam-paharoa sy ny hatsaran-tarehy, ny coziness tokana ary ny hafanana, ny firindrana eo amin'ny loko sy ny endriny. Ny trano tsirairay dia mety ho lasa toerana mahafinaritra sy manintona, izay manaitra sy manintona ny mpitsidika.
Satto Art Gallery dia galeriana an-tserasera manolotra - fitaratra voatavo и hoso-doko.
About Satto Art Gallery
Art Studio Satto - fitaratra mihosoka. Fitaratra be hosodoko.
Raha ny toe-tsaina matihanina no filozofian'ny orinasa, dia ny fanavaozana sy fahitana no teny manan-danja amin'ny fomba fiasa amin'ny asa vaovao. Laharam-pahamehana Satto Art Studio dia ny mitahiry ny tsirony mahafinaritra amin'ny famoronana sary miavaka sy sangan'asa tsy hay hadinoina.
Varavarankely fitaratra mihidy ao anatiny.
Ny fitaratra voasokitra dia karazana vera voatoto ao amin'ny teknikan'ny fitaratra miloko ary asan'ny mpanoratra manokana. Atao tànana, miaraka amin'ny fitaratra tsirairay voasokitra ao anaty kopia tokana. Ny tetikasa dia voafaritry ny filan'ny tsirairay ary mifanaraka tsara amin'ny atiny.
Atiny anatiny »
© 2012-2020 Fahatsapana zavakanto - hevitra ho an'ny trano sy zaridaina
Politika momba ny tsiambaratelo Fepetra fampiasana Fifandraisana sy doka